स्थानीय चुनावमा भाग्यमानी नातेदार - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
स्थानीय चुनावमा भाग्यमानी नातेदार
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट पाउँनका लागि तँछाड मछाड भए तापनि केही व्यक्तिहरु अरुलाई पन्छाउँदै टिकट पाउँने भाग्यमानी भएका छन् । पार्टीले टिकट नदिंदा केही नेताहरु पार्टी छाड्नेसम्मको धम्की दिने र पार्टीको निर्देशन समेत नमान्दै विद्रोहसम् मगर्नेहरु पार्टीहरु भित्र धेरै देखिए ।
टिकट पाउँन ठूलो प्रतिस्पर्धा भए तापनि दोलखाको एक जोडीले श्रीमान् श्रीमति नै टिकट पाउने भाग्यमानी जोडी भएका छन् । एमालेबाट भीमेश्वर नगरपालिकामा उपमेयरमा टिकट पाउने कमला बस्नेत र मेलुङ गाउँपालिका वडा नं. ७ को अध्यक्षका उम्मेद्वार नवराज खड्का भाग्यमानी जोडी हुन् । बस्नेत भीमेश्वर नगरपालिकाको उपमेयरमा अन्य आधा दर्जन प्रतिस्पर्धीहरुलाई पछिपार्दै उनले टिकट पाएर उम्मेद्वारी दर्ता गराएकी हुन् । त्यसैगरी उनका श्रीमान् खड्का पनि अन्य प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै पार्टीबाट टिकट पाएका हुन् ।
त्यस्तै गौरीशंकर गाउँपालिकामा पनि ३ जना आफन्तहरु वडा अध्यक्षमा टिकट पाउँने भाग्यमानीहरु हुन् । एमालेबाट गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ र ५ बाट टिकट पाउँने वडा अध्यक्षहरु भाग्यमानी हुन् । वडा नं. ५ सुरीबाट डिल्लीध्वज बस्नेतले टिकट पाए । त्यस्तै उनका सम्धी अनिल खड्काले गौरीशंकर ३ झ्याँकूबाट टिकट पाए भने वडा नं. ४ झ्याँकुबाटै बस्नेतका साला माधव खत्रीले वडा अध्यक्षको टिकट पाए । तिनै जना शिक्षकबाट राजिनामा गरी वडा अध्यक्षको टिकट पाएका हुन् । डिल्लीध्वज बस्नेत भने नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद पार्वत गुरुङका मित हुन् ।
एमाले भित्र सुरी र झ्याँकूमा पार्टीकै लागि भने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत संगठनकै लागि काम गर्नेहरु पाखा लगाएर शिक्षकहरुलाई पार्टीले टिकट दिएको हो । गौरीशंकर ३ र ४ मा टिकटका लागि विवाद भएपछि सार्वजनिक गरेको थिएन । पार्टीमा छिरीनाम्गेल शेर्पा, एकमबहादुर खड्का, जिस्णु खड्का लगायतका नेताहरुलाई पार्टीले किनारा लगाएको छ ।
मेलुङ गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस तर्फबाट अध्यक्ष वर्मा लामा र वडा अध्यक्षमा उनका भाई राजु लामाले टिकट पाएका छन् । बर्माले गाउँपालिका अध्यक्षमा यस अघि नै टिकट पाउँने पक्का भए तापनि उनका भाई राजुले अन्तिम समयमा आएर मेलुङ गाउँपालिका वडा नं. ६ को वडा अध्यक्षको टिकट पाएर उम्मेद्वारी दर्ता गराए । मेलुङ गाउँपालिकामै एमालेबाट अध्यक्षको टिकट पाएका नरबहादुर श्रेष्ठका जेठान अम्बिका गोलेले मेलुङ गाउँपालिका वडा नं. ४ भेड्पूबाट वडा अध्यक्षको टिकट पाउँन सफल भएका छन् ।